Mgbazinye ụgbọ ala na ego kacha mma?
Naps na-achọ ụgbọ ala mgbazinye, site na igwe nchọta ihe ndị a ị ga - achọta ihe ịchọrọ.
Carsgbọ ala mgbazinye
Hazi njem nwere ike ịbụ ọrụ dị mfe ma ọ bụ, na ntụle, ozi karịrị ihe agaghị ekwe omume. Họrọ nke ọma njem, ụgbọ elu, họtel ..., ọtụtụ ihe ị ga-ebu n'uche na ị ga-ahọrọ nke ọma ka ị ghara ịghasa. Na ihe niile a ga-atụkwasịkwara ihe dị ezigbo mkpa: Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na anyị ga-aga ogologo ụzọ ma ọ bụ gaa obodo dị iche iche n'oge njem anyị?
Nhọrọ kachasị na ọnọdụ ndị a, na nke kachasị mfe, bụ iji ụgbọ njem ọha. Otú ọ dị, nhọrọ a nwere ike ime ka anyị nwee nsogbu karịa ndị na-ebili na mbụ, ebe ọ bụ na anyị nọ n'okpuru usoro usoro ihe omume a na-akwụ ụgwọ ikpeazụ nke njem ahụ nwere ike ịdị elu n'ihi ọnọdụ a. Kama nke ahụ, ọ naghị adị mfe mgbe niile iburu nke gị. Gini ka anyi ga - eme?
Azịza nye ajụjụ a dị nnọọ mfe: ụgbọ ala mgbazinye. Typedị ụgbọ ala a na-achọwanye ndị ọrụ chọrọ ịchọrọ ezigbo njem na-enweghị atụ. Ọ bụ eziokwu na ịgbazite ụgbọ ala taa abụghị echiche na-adọrọ adọrọ nye ọtụtụ mmadụ, ndị ka na-amaghị ọtụtụ uru ya.
Na-esote, anyị ga-enyere gị aka, dozie ọtụtụ obi abụọ ma duzie gị mgbe ị na-agbazite ụgbọ ala. Ọ bụrụ n'ịchọrọ inweta ụgbọ ala mgbazinye na ọnụahịa kacha mma, ị ga-pịa ebe a.
Uru nke iji ụgbọ ala mgbazinye
Dịka anyị kwuburu na mbụ, iji ụgbọ njem ọhaneze eweta ọtụtụ ọghọm ma e jiri ya tụnyere nnukwu uru eziokwu ịgbazite ụgbọ ala na-enye anyị.
Nke mbụ n’ime ha niile bụ Libertad. Mogafe ogologo oge ịchọrọ bụ ihe dị egwu. Ihe ga - abụ nchegbu nke nwa okorobịa ahụ: kedu oge ụgbọ ala na - ahapụ? Ebee ka ị ga - esi banye ụzọ ụgbọ oloko? Etc., nke nwere ike bụrụ ezigbo mmekpa ahụ.
Nke abụọ, nkasi obi. Ọ bụghị otu ihe ị ga-eme iji banye na bọs ma ọ bụ metro jupụtara na mmadụ nke ịchekwa akpa gị nwere ike ịbụ njem zuru oke, ebe ọ bụ na n'ọtụtụ oge anyị enweghị ohere ịchọrọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị ịgbazite ụgbọ ala, a ga-ewepụ ọnọdụ ndị a niile.
Igodo ọzọ bụ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ihe ego. Gbazite ụgbọ ala nwere ike ịdị ihe dị ka € 5-15 kwa ụbọchị, ihe dị ala karịa ụgwọ ịnwe ọtụtụ bọs, tagzi, wdg, iji si n'otu ebe gaa ebe ọzọ.
Naanị ụfọdụ uru dị na ịgbazite ụgbọ ala ka ekwuru. N’ezie, mgbe ị kpebiri ime ya, ị ga-ahụ na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ.
Nwere ike ịgbazite ụgbọ ala n'ịntanetị?
N'ụwa dị otú a zuru ụwa ọnụ nke ịntanetị mebiri ihe mgbochi niile, a ga-ekwupụta ya n'ụzọ doro anya na, n'ụzọ doro anya, ọ nwere ike gbazite ụgbọ ala n'ịntanetị.
Ọ bụrụ na anyị ejiri oge ole na ole nke oge anyị bara uru na iji kọmputa anyị ma ọ bụ Smartphone na-agagharị, anyị ga-ahụ na netwọkụ jupụtara na ụlọ ọrụ ndị raara onwe ha nye ngalaba a na nke anyị nwere ike iji ọrụ ha n'ụzọ dị mfe na kpamkpam n'ịntanetị.
Anyị nwekwara ike ịchọta ndị a ma ama ndi nyocha, nke na-akwado ọrụ anyị n'ụzọ dị egwu. Igwe ihe nchọgharị ndị a na-asọgharị n’agbata onyinye dị iche iche iji gosi anyị ndị kachasị mma ma masị anyị.
N'ime ụlọ ọrụ ndị kachasị amaara anyị gosipụtara mmefu ego y echiche. Budget bụ ụlọ ọrụ Californian hiwere na njedebe afọ 50, nke nwere karịa Officeslọ ọrụ 3000 dị na 128 mba gburugburu ụwa. N'aka nke ya, Avis mara site na ịnwe ngwongwo nke ụgbọ ala niile na ọnọdụ niile iji mejuo onye ọrụ ọ bụla.
Na, ruo na ntanetị dị n'ịntanetị, anyị enweghị ike ịhapụ na-ekwughị KAYAK, a na-eduga na ngwa mkpanaaka na-enwe ọmịiko nke imirikiti ọha na eze maka ịdị irè na ịdị mfe. Egbula iji ya.
Kedu ka igwe nchọta mgbazinye ụgbọ ala ịntanetị si arụ ọrụ?
Un ụgbọ ala nyocha ụgbọ ala n'ịntanetị bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mfe iji. Ọzọkwa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ndị a niile na-arụ ọrụ n'otu ụzọ.
Dịka ị pụrụ ịhụ n ’ụlọ ọrụ mgbazinye ụgbọ ala anyị, ọ na-egosi anyị obere nke nwere oghere dị iche ma ọ bụ igbe oghere anyị nwere ike jupụta na ozi a jụrụ anyị.
Nọmalị, anyị na-jụrụ ebe anyi choro iburu ugbo ala. Mgbe, ụbọchị nchịkọta na nnyefe nke otu. Ndien ke akpatre, anyị ga-mezue na ụgbọ ala atụmatụ ya onwe ya: ụdị, ihe nlereanya, wdg.
N'ezie, dabere na injin nchọ anyị na-eche ihu, anyị ga-enye otu ozi ma ọ bụ ọzọ, mana dị ka iwu izugbe ndị a na-abụkarị nkọwa ndị a na-achọkarị n'aka anyị.
Nwere kaadị kredit dị mkpa ịgbazite ụgbọ ala?
Gbazite ụgbọ ala na-enweghị kaadị kredit nwere ike ịbụ ihe na-agaghị ekwe omume, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ a anaghị enwekarị ezigbo mmekọrịta ịkwụ ụgwọ ego.
Ihe kpatara nke a dị mfe. Vehiclegbọ ala dị oke ọnụ, siri ike ịchekwa, yabụ ijide n'aka na ọ dị mma mgbe ejiri ya dị mkpa. Iji mee nke a, ha na-emepụta ụdị mkpuchi nke agbakwunye na ọnụahịa mbụ nke mgbazinye ụgbọ ala.
Kwuru na mkpuchi onye ọrụ ga-akwụ ụgwọ naanị na nke a kpatara nsogbu n'ụgbọ ahụ. Ka ọ dị ugbu a, a na-eche ha nche n'ihe a maara dị ka nkwụnye ego, nke bụ ihe ọ bụla karịa nkwụsị mbụ nke ụfọdụ ego nke ego zuru ezu dị na kaadị ahụ, nke a ga-ahapụ mgbe nnyefe nke ụgbọ ala zuru oke.
Nke a bụ isi ihe kpatara eji eme kaadị akwụmụgwọ mgbe niile mgbe ịgbazite ụgbọ ala. Ma anyị na-ekwu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile, n'ihi na nke a na-agbanwe agbanwe, taa ọ ga-ekwe omume ịgbazite ụgbọ ala site na ịkwụ ụgwọ ego na ụfọdụ ụlọ ọrụ dịka, dịka ọmụmaatụ, Akpaaka.
Car mgbazinye n'etiti ndị mmadụ
N'oge a, ụlọ ọrụ ọhụrụ apụtawo na-eji usoro ọrụ ọzọ. Ha abughizi ndi na-etinye ugbo ala ha n'aka anyi, kama ha na-eme ya site na ndị mmadụ n'otu n'otu.
N'aka ozo, mmadu di iche iche na agbazite ugbo ala ha site na ulo oru, na ebumnuche nke irite uru. Site na mgbasa ozi, ha na-egosi ego na nnweta, ndị nwere mmasị na-akpọtụrụ ha. Onye nwe ụlọ na onye ahịa ahụ na-ezukọ maka nnyefe na nchịkọta nke ụgbọala ahụ, nke ga-enwerịrị ọnọdụ zuru oke ma nwee tank mmanụ.
N’uzo a di mfe, gini ka amara dika 'mgbazinye ụgbọ ala n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu'.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbazite ụgbọ ala maka ogologo oge, ikekwe nhọrọ nke ịgbazite Mercedes ma ọ bụ akara ọ bụla ọzọ dị mma ga-aka gị mma ebe ọ bụ na ha na-enye ọnụ ahịa asọmpi na mgbe obere oge ị nwere ike ịhọrọ iji mee ka ọ dị ọhụrụ ma ọ bụ weghachite ya na-enweghị ọrụ.